बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो, बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त रु फुपूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण के हो? (भिडियो हेर्नुस्) « Gaunbeshi
बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो, बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त रु फुपूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण के हो? (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति : 24 June, 2021
काठमाण्डौ। माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा घटनाको छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । माइतीले विवाहमा दाइजो कम भएको गुनासो विष्णुको श्रीमान र उनका परिवारले गरेको बताएकी छन् । माइती पक्षले दिएको सुन कम भएको भन्दै गुनासो गरेको विष्णुको आमाले भिडियोमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
बिवाह भएको २७ दिनमै श्रीमानको घरमा निधन भएको घटना रहस्यम भन्दै माइती पक्षले आवाज उठाएका छन् । विष्णुको माइतीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले विष्णुको श्रीमान र सासुलाई पक्राउ गरेको छ । बुधवार विष्णुको श्रीमानलाई पक्राउ गरेको थियो भने विहिवार उनको सासुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै दुई दिन अघि वुटवल स्थित प्रहरी कार्यालयमा विष्णुका माइती पक्षले नारावाजी गरेका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै विरोध गरिएको थियो । प्रहरी कार्यालय अगाडी भिड जम्मा भएपछि केही वेर विवाद समेत भएको देखिएको थियो । पोखराकी विष्णु वरालको विवाह रुपन्देहीका प्रदिप भट्टराईसंग भएको थियो । विवाहको २७ दिनमा उनको रहस्यम निधन भएपछि सो घटना विवादित बनेको छ ।
माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा घटनाको छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । मंगलवार उनीहरु वुटवल स्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा बवाल भएको छ । प्रहरीले ५ जनालाई मात्र कार्यालय भित्र जाने अनुमति दिएको थियो । तर ठूलो संख्यामा विष्णुका माइती प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सबैले प्रहरी प्रमुखलाई भेट्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
बाग्मतीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने
हेटौँडा । बाग्मती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत नपाउने भएपछि गठबन्धनलाई नयाँ
केहीबेरमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिने
अल्पमतमा परेकी बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिने तयारी गरेकी छिन् प्रदेशसभाको
महिलाले शव बोके, घाट सम्म लगे अनि आफै दाहसंस्कार गरे
तनहुँ । छोरीले शव बोक्न तथा काजक्रिया गर्नुहुँदैन भन्ने सामाजिक कुरुतीलाई तोड्दै यहाँका महिलाले
काठमाडौंँ । ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२१’ मा १६ प्रतियोगी भिड्ने भएका छन् । आयोजक उमङ्ग
६ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि बालकको सकुशल उद्धार
कपिलवस्तु । आर्थिक लेनदेन र अ’पह’रण गर्दा लागेको पैसा बुझाएपछि कपिलवस्तुका अ’पह’रित बालक मुक्त
लाइसेन्स खुल्यो, कसरी दिने आवेदन ?
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को आवेदन
जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए
मकवानपुरको एक गाउँपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरी, जसले दुई साताअघि एक छोरालाई जन्म दिइन्। जन्मिने